चीनद्वारा नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी ! ओली सरकार मौन - Sankalpa Khabar
चीनद्वारा नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी ! ओली सरकार मौन
१० माघ १७:३६
काठमाडौं । संघीय निर्वाचन ताका वामपन्थी दललाई एउटै बनाएको अपुष्ट आरोप लागेको चीनले यतिबेला नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी गरेको छ । वामपन्थीहरु संघारमा पुगेका बेला चीनले नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी लगाउनुलाई संयोग मात्र मान्न नसकिने जानकारहरुको विश्लेषण छ ।
निर्वाचनताका वामपन्थीहरुलाई एउटै बनाउँदा जुन सहमति भएको थियो, त्यसलाई लत्याएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतसँग घाँटी जोड्न मात्र पुगेनन्, संविधानको हुर्मत लिन राज्यका अबयब प्रयोग गरेपछि चीन रिसले आगो भएको छ ।
भारतसँग बिग्रेको सम्बन्ध पुरानै लयमा फर्केपछि वामपन्थी दलहरुबीच चुनावताका गरिएको सहमति कुनै पनि कार्यान्वयन नहुने पक्काजस्तै भयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नेपालको उत्तरी सीमा विवाद उठाएपछि नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमा थप दरार उत्पन्न भयो । भुसको आगोझै भित्रभित्रै बल्दै गरेको नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध त्यतिबेलासम्म ठीक थियो, जतिबेला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एउटै दल थिए ।
भुसको आगोझै भित्रभित्रै बल्दै गरेको नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध त्यतिबेलासम्म ठीक थियो, जतिबेला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एउटै दल थिए ।
भारत र चीनबीचको सीमा विवाद उत्सर्गमा पुगेको छ । यो विवादले ठूलै युद्ध निम्त्याउने खतरा अझै टरिसकेको छैन । भारत र चीनको नेपालमा स्वार्थ भनेको आ–आफ्नो परियोजना कार्यान्वयन गराउनु हो । बीआरआई परियोजना नेपालमा कार्यान्वयन गर्ने योजनामा चीन रहेको छ भने अमेरिकी परियोजनाको एमसीसीलाई अघि बढाउन भारतले सहयोग गर्ने तयार छ ।
चीनको बीआरआई र अमेरिकी परियोजना एमसीसीमध्ये एउटा रोज्दा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेको हो भन्नलाई कुनै आइतबार पर्खिनुपर्ने भएन । अबको राजनीतिमा दुई छिमेकी मुलुक जेजसरी प्रस्तुत भए पनि यतिबेला भारतको कोटमा बल पुगेको छ । भारतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई काँध हालेको छ ।
करिब एक वर्षदेखि उत्तरतर्फको मुख्य नाका तातोपानी र रसुवागढीमा चीनले अघोषित नाकाबन्दी लगाएको छ । चीनसँग समन्वय गरेर नाका सहज बनाउन सरकारले पहल गरेको छैन । तत्काल ओली सरकार चिनियाँ पक्षको कुरा सुन्न तयार छैनन् ।
पटक–पटक समस्या हुने गरेको तातोपानी नाका समेत बिहीबारबाट २० दिनका लागि बन्द गरिएको छ । चीनले मितेरी पुलमा समस्या आएकाले नाका बन्द गर्नु परेको बहाना बनाएको छ । अहिलेसम्म ठीक अवस्थामै रहेको तातापानी नाका एकाएक किन मर्मत गर्नुप¥यो, त्यो कुरा बुझ्न सजिलो छ ।
करिब एक वर्षदेखि उत्तरी नाकामा अघोषित नाकाबन्दी रहेको तथ्यबारे प्रधानमन्त्री ओलीमात्र होइन, परराष्ट्रमन्त्रीदेखि आपूर्ति मन्त्रीसम्म जानकार छन् ।
नेकपाको दुबै समूह एक अर्कालाई सिध्याउने खेलमा
१९ फाल्गुन ०७:०३
‘वेटिङ’ प्रधानमन्त्री हुँ, तर दौडमा छुइँनः सभापति देउवा
२२ फाल्गुन १५:३७
विप्लव नेता धर्मेन्द्र बाँस्तोला रिहा
२१ फाल्गुन ११:५७
देउवाले बोलाए पदाधिकारी र प्रभावशाली नेताहरूको बैठक
२० फाल्गुन ०९:१९
विप्लपसँग वार्ता गर्न समिति गठन सकारात्मकः कांग्रेस
१८ फाल्गुन १८:०४
दुई वर्षपछि आज सार्वजानिक हुँदै विप्लव, प्रधानमन्त्रीसँग एउटै मन्च…
२१ फाल्गुन ०७:४३